Watch Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Watch Box)
Akwukwo Edere na Mpempe Ihe E Dere Edemede Kaadi kaadiboodu, kaadiboodu igbe akwukwo, di elu na akara eji ebiputa ya. Igbe Ahịa Omenala, igbe ọkpọka nke nwere akara dị iche iche nwere mkpuchi maka nche. Igbe Single Single, tinye otu elekere n’ime igbe ahụ, nwere ike iji ụfụfụ ma ọ bụ velvet. Liyang Paper ngwaahịa co.,...
Akwukwo kaadiboodu ekiri nke C-clip ekiri Okomoko style akwụkwọ ekara kaadiboodu igbe na leatherette wrapping maka nche nkwakọ, igbe na akwụkwọ wrapping ga-eri obere. Igbe kaadiboodu na c-clip rọba maka igosipụta ya, enwere c-clip metal maka nhọrọ gị, ị nwekwara ike ịhọrọ akwa akwa ihiri isi maka ihe dabara adaba na...
Igbe kaadiboodu siri ike na c-clip maka bangle Isiike kaadiboodu igbe na leatherette wrapping maka jewellry bangle nkwakọ, igbe na akwụkwọ wrapping ga-eri obere. Bangle kaadiboodu na roba C-clip maka igosi bangle, enwere c-clip ano maka nhọrọ gi, you nwekwara ike ịhọrọ akwa ohiri isi nke ịcha akwa dị mma maka bangle...
Igbe mkpuchi siri ike na kaadi mkpuchi na mkpuchi kaadiboodu bangle igbe na-eji mpempe akwụkwọ eji emechi ihe ndozi ngwongwo nke ezi okwu Bangle igbe na pilo maka igosipụta bangle, enwekwara c-clip metal / roba maka nhọrọ gi Igbe kaadiboodu nwere mkpuchi bụ ụdị igbe dị mfe, mana ọ nwere ike ime ka ngwaahịa gị dị...
igbe kaadiboodu mara mma nke ọmarịcha bọọlụ Akwukwo olu di nma na- adi nma ma nwekwaa ahihia zuru oke maka mbiputa ihe olu Maka igbe kaadiboodu a , anyị na-agbakwunye rịbọn na mpụga igbe iji mee ka ọ mara mma karịa. Nabata na omenaala mee igbe ozi ọlụlụ gị! Liyang Paper Products Co., Ltd, bụ nke e wusiri ike na 1999,...
Mpempe akwụkwọ onyinye ohiri isi maka ngwugwu ọla A na-eme igbe ohiri isi mpempe akwụkwọ na 350gsm art art, igbe mpempe ọkụ dị mfe maka ịkwado ọla igbe ohiri isi maka ichota ihe eji achọ mma na ejiri aka ojoo wedata aka, sie ike wepu ya igbe mpempe akwụkwọ ọla mma nke na-ebi akwụkwọ dị elu maka ngwugwu ọla Chọrọ...
Nkwakọ ngwaahịa igbe akwụkwọ onyinye na Ribbon
Nkwakọ ngwaahịa igbe onyinye na rịbọn Akwukwo Onyinye onyinye a na udi nke akara ngosi, akara ocha edo edo di n’elu na n’elu; Akwukwo mpempe akwụkwọ na Ribbon Hande maka imewe okoko osisi ma bupu ya. Mpempe Akwụkwọ Akwukwo Akwukwo a nakweere omenala mere ka i nweta akara ngosi na okike, nweere onwe gi nyocha ya site...
Rectangle nnukwu igbe ifuru onyinye igbe Ihe nha ihu Ego buru ibu akwụkwọ igbe kaadiboodu maka ịkwado okooko osisi ogologo; Akwukwo onyinye onyinye ifuru a buru oke ma too ogologo maka ndowe ndo nke ogologo azu; Ihe ndozi nkuku dị mfe maka ngwugwu dị mfe. Art akwụkwọ nwere ihe greyboard; rịbọn ụta imewe na mkpuchi nke...
Kaadiboodu igbe ozu ndi mmadu nke nwere mkpuchi na ụta Igbe akpukpo ozu nke Custom Flower nke nwere nnukwu rịbọn ogologo maka ịkwado okooko osisi ogologo; Akwukwo kaadi akwukwo ozi kaadi a nke buru ibu nke na-acha ocha nke na-acha ocha; Igbe kaadiboodu nke eji ụta eme ihe siri ike ma mara mma dị ka nkwakọ ngwaahịa...
Igbe mpempe akwụkwọ ntụrụndụ na ntinye velvet Akwukwo ihe nlere okpokoro nke ejiri akwukwo mee ya; Elegante oroma agba na akara oji akara mbipụta obibi anya n'ihi ya; Akwukwo elekere nke nwere ihe di ocha nke di ocha di elu ma jie ocha. Akwukwo a na-elele akwụkwọ nke a na Insert Acepted omenala mere, ọzọ ihe gị...
Igbe mpempe akwụkwọ ntụrụndụ na ntinye velvet Akwukwo Akwukwo Ihu Akwukwo Nso nke ejiri akwukwo mee ya; Elegante oroma agba na akara oji akara mbipụta obibi anya n'ihi ya; Igbe kaadiboodu nke nwere ihe di elu ovu ocha di ocha tinye iji jide ma gosiputa elekere. Akwukwo Akwukwo Nso Nke Akwadoro na nke a Companylọ...
Nkwakọ ngwaahịa igbe akwụkwọ ntụrụndụ Igbe okomoko nke mpempe akwụkwọ nka jiri mpempe nka; Elegante oroma agba na akara oji akara mbipụta obibi anya n'ihi ya; Igwe mkpuchi na ụdị isi igbe igbe nwere nnukwu velvet na-acha ọcha dị elu maka ntinye na ngosi Akwukwo Ncheche Akwukwo a na nke Fanyechara ahaziri Emebe nke...
N'ogbe buru ibu maka igbe elele mpempe akwụkwọ dị ọnụ ala Igbe Nkwa N'ogbe Ndi Akwukwo Nso; Elegante oroma agba na akara oji akara mbipụta obibi anya n'ihi ya; Uwe mkpuchi na udiri ụdị igbe igbe dị ọnụ ala na akwa velvet dị ọcha na njedebe dị elu maka njigide na ngosi Nke a Akwukwo Akwukwo Ozi nke Watch...
Onyinye onyinye igbe maka ihe ngosi Akwukwo gosiputara igbe eji eme ihe; Elegante oroma agba na akara oji akara mbipụta obibi anya n'ihi ya; Nkwakọ onyinye onyinye igbe nwere akwa dị ọcha dị ọcha na-etinye na nkwakọ na ngosipụta ihe ngosi. Nkwakọ ngwaahịa igbe akwụkwọ a na Fanye ahaziri nke ọma, ihe ndị ọzọ ị...
Akwukwo igbe onyinye ndi ahia ahia di onu ahia Mpempe akwụkwọ nlere nke Akwukwo Nso nke eji mpempe akwukwo; Elegante oroma agba na akara oji akara mbipụta obibi anya n'ihi ya; Igwe mkpuchi na ụdị isi nke igbe onyinye onyinye dị ọnụ ala nke nwere akwa dị ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha maka ihe ngosi na nkwakọ. Igbe...
Akwukwo oji oji nke oji oji nke ime ime Igbe elekere ojii , igbe mpempe akwụkwọ 2pcs dị mfe na ohiri isi dị nro maka igosipụta oge igbe nlere ọla ịchọ mma , igbe mkpọchi kaadiboodu siri ike Igbe dị oji na agba ojii nwere windo maka ngosipụta ọla ịchọ mma, site na iji ụkpụrụ a, onye ahịa gị nwere ike nyochaa igbe ahụ...
Igbe ngwugwu ọla dị mma na ntinye akpụkpọ anụ Round ọla igbe dị maka ịkwado ọla; Igbe nkwakọ ngwaahịa ụdị ọla ndị a na-anabata mbipụta akara omenala ma ọ bụ stampụ. N'ime igbe ọla chọọ Inye Akpụkpọ anụ maka ihe olu ma ọ bụ ihe mgbaaka. ihe ntinye bu obere ihe eji ewulite elu. Liyang Paper Products Co., Ltd, bụ nke...
Igbe ngosipụta ihe nrịbaama bọọlụ ahaziri mma Kaadi kaadiboodu ọla nke ichoro icho mma; Igbe ụdị ọla ndị dị otú ahụ na-anabata mbipụta akara omenala ma ọ bụ stampụ. Igbe Azụmaahịa Ahịa nke Azụmaahịa n'ime akwa akpụkpọ anụ maka ihe njigide mma. Akwụkwọ ọcha na oji na-eji oji na-ebi akwụkwọ na-acha odo odo igbe igbe...
igbe oyuyo nke square
igbe oyuyo nke square Igbe elekere nke etiti , igbe igbe , nke a na-eme n'ụdị igbe plastik okomoko, dị n'èzí bụ mpempe akwụkwọ na-ekpuchi ya ma n'ime ya Akwukwo plastik okomoko nke pel na velvet maka nkwakọ elekere, igbe plastic bụ ụdị igbe a ma ama n'ihi na ọ dịghị mfe ịgbanwe ka oge na-aga, mana ọ...
Ezigbo ahịa ojii ji agba elekere elekere Ezi ọkwa maka igbe mkpọ mmanya, nke kwesịrị ekwesị maka mmanya, Ọ dịkwa mma ka ọ bụrụ onyinye Onyinye Wine, nke dị nfe ma ọ bụghị nke dị ọnụ ala, Igbe mmanya, eji aka, ọ dị mfe iburu ya ma na-akwanyere ugwu. 1) 17yeri ahuhu ighota ihe di nma na ntukwasi obi. 2) Ihe akụrụngwa...